नियमित शा,री,रिक स,म्बन्ध राख्ने महिलाहरु कसरी चिनिन्छन् ? - Buletin Nepal
नियमित शा,री,रिक स,म्बन्ध राख्ने महिलाहरु कसरी चिनिन्छन् ?
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै प’रिवर्तन भइहाल्छ ।
के कारण छ त्यसको पछाडी रु सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सो’धकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार निय’मित स’हवास गर्ने महिलाको शारीरिक ब’नावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एकदिनमा नै पटक पटक सह’वास’मा लि’प्त बन्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फु’लेर ठूलो हुने गरेको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हि’पको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ’न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ।
उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हि’प ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै स’मस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको। आमाको दूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउनेरुयो
प्रकाशित मिति १२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०३:०१